Home » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Palestine na -agbasa
Esemokwu Israel na Palestine nke Hamas na-arịwanye elu na agha obodo. A na-emega ụgbọ elu na Tel Aviv ...
Ọrịa na US, Israel, Palestine! Olee na-adị ndụ? 3 ụmụ nwanyị ...
Wa na-abịakọta ọnụ. Coronavirus amaghi oke ala, enweghị ebere ma chọọ igbu. Na ...